Azo ambara ho tsy manana fototra loatra ifotony ity antokon’ny fitondrana ity, araka ny fanazavany. Izany indrindra no hanamafisana ny rafitra eny anivon’ny kaominina izay mampisongadina ny HVM amin’ny alalan’ireo mpanolotsaina sy ben’ny tanàna maro eto amin’ny firenena. Io rahateo no paikady trandrahan’ny antokon’ny filoha am-perinasa Rajaonarimampianina Hery amin’izao fotoana izao. Nisantarana izany moa ny fifanentanana teo amin’ireo olom-boafidy mpikambana sy mpanohana na mpiara-dia amin’ny HVM Atsimondrano hanamafy ny rafitra efa mipetraka, araka ny angom-baovao natao teny an-toerana. Somary nahagaga kely ihany fa tsy niresaka ny raharaha mafampana teto amin’ny firenena ny HVM izay antokon’ny fitondrana ary nody fanina momba ny zava-manahirana ny tany sy ny fanjakana.